Fumana olona nudist lubalaseleyo kwiTenerife | Iindaba Zokuhamba
Susana Garcia | 31/03/2021 15:25 | ngokubanzi, Iilwandle, Tenerife
La Isiqithi saseTenerife yenye yezona ndawo zifunwa kakhulu eSpain yemozulu yayo efudumeleyo unyaka wonke kunye nenani elikhulu lamabhanqa anayo. Uninzi lwezi ziilwandle ezinganxibanga kwaye zikuvumela ukuba wenze naturism ngokuzolileyo ngelixa wonwabele ilanga kunye nokudada okuhle. Ukuba uza kutyelela isiqithi ungafuna ukwazi okungakumbi malunga nonxweme lwe-nudist enalo kunye nezinto abazibonelelayo.
Las Amanxweme anganxibanga anokubonelela ngokukhululeka okanye ube zizithuba apho kunyanzeliswa khona kunyanzelekile. Uninzi lwazo lukuvumela ukuba ukhethe ngokukhululekileyo ukuba ngubani olindwendwelayo, ukonwabele zonke iindlela onokukhetha kuzo. Siza kubona ukuba isiqithi saseTenerife kwiiCanary Islands singasinika ntoni malunga nonxweme lwama-nudist.
1 Ibhitshi laseLa Tejita
2 Unxweme lwaseLos Morteros
3 Ulwandle lwasePelada
4 Ulwandle oluBomvu lweNtaba
5 Ulwandle lwasePatos
6 Ulwandle lwaseLas Gaviotas
7 Unxweme lwaseBenijo
Ibhitshi laseLa Tejita
La ITejita lulwandle olunentlabathi olunabela kufutshane neNtaba ebomvu, Elinye lawona manqaku abonakalayo esiqithi anokubonwa emoyeni. Olu lwandle lubalasele ngamanzi acocekileyo kwaye luyindawo yokuntywila, kuba ihlala inamaza nomoya. Indawo ekufuneka ityelelwe, nangona kukho iilwandle ezizimeleyo, kodwa kuyo nayiphi na imeko ime nkqo ngenkangeleko apho ikhoyo kunye nokuba yenye yezona zidumileyo.
Unxweme lwaseLos Morteros
Olu lwandle lubekwe kwichweba elincinci, ke lisondele ngakumbi kwaye lamkelekile kunezinye ezinkulu. Ime kufutshane ne Indawo yeNdalo yamawa eLa Caleta kunye nokufudukela kwabantu ezidolophini ezinegama elifanayo, eliyindawo efanelekileyo yokuhlala. Le Cove iyodwa ukuba siyithelekisa nabanye kodwa iyathandeka kwaye ithule, ke kufanelekile. Yindawo ekhuselekileyo yendalo kwaye ke ngoko siya kuzifumana kwindawo entle kakhulu apho ubunqunu bunokwenziwa khona. Ukongeza, ibonelela ngekristale ecwengileyo amanzi alungele i-snorkeling okanye ukuntywila.
Esi siqithi sinee-coves ezininzi ngenxa yokukhukuliseka kolwandle kwilitye lentaba-mlilo kwiminyaka edlulileyo, ke oko kusinika indawo ezininzi zokwenza ubunqunu ngendlela ethe cwaka. Unxweme lwaseLa Pelada lubekwe nje ngaphaya kwendawo yase-El Médano kwaye yindawo encinci phakathi kwamatye kunye nesanti emnyama yesiqithi kunye nobude obumalunga neemitha ezingama-80. Incinci kodwa iyonwabisa, ayinazinkonzo kodwa ungashiya imoto yakho kufutshane ukuze ibe yinto elungileyo ukuba awufuni ukuhamba kakhulu.
Ulwandle oluBomvu lweNtaba
Olu lwandle luyabonakala xa ufika kwesi siqithi kuba sisondele kwisikhululo seenqwelomoya. ndiyazi malunga nentaba-mlilo ebizwa ngokuba yiNtaba ebomvu luphawu lwenene olo kwaye lubonakala nembonakalo yomhlaba. Olu lwandle lukwasinika nethuba lokwenza ubunqunu kwindawo eyodwa yokuma komhlaba esingenakufumana siqithi, kungoko ke kufuneka singathandabuzi ukusondela kuyo. I-cove eyaziwa ngokuba yiPlaya de Montaña Roja yindawo esondelelene ngakumbi kunonxweme lwaseLa Tejita oluya kufutshane nentaba kwaye lwaziwa ngcono. Kuzo zombini unokwenza ubunqunu nangona eli cove lincinci kwindawo enamatye lisamkela ngakumbi.
Yiyo ulwandle lwasendle luthathwa njengeyona intle eTenerife ukwenza ubunqunu. Amanzi acwebe iCrystal, isanti emnyama kunye neentaba eziluhlaza ezime zodwa kwaye zenze umxube omangalisayo wemibala ebonakalayo nenomtsalane. Ime kufutshane nolwandle iAncon, yahlulwe ngumngqameko. Unxweme lwaseOrotava luhle ngokwenene kodwa kuya kufuneka ulumke xa uhlamba kwimisinga ngenxa yoko ayilungelanga iintsapho.
Ulwandle lwaseLas Gaviotas
Ukuba udlula kunxweme lwaseTeresitas, oludumileyo kwesi siqithi, kuya kufuneka ume ePlaya de las Gaviotas, apho ubunqunu buvumelekile. Ingqongwe yi amanye amawa amangalisayo kunye nudism simahlaOko kukuthi, singanxiba isuti yokuqubha okanye hayi. Esona sithintelo kukuba kumaza aphezulu amancinci, kodwa ukuba sihamba kumaza asezantsi sinokuyonwabela ngcono. Kuphela ziimitha ezingama-250 ubude kodwa lulwandle kude nolwakhiwo lwabakhenkethi kwindawo ethe cwaka kwaye kungoko kunokuba kufanelekile ukonwabela usuku olukhululekileyo elunxwemeni.
Olu lwandle ludume ngokwenene kwaye luyabonakala nguRoque Benijo kunye noRoque la Rapadura. Ngumfanekiso owaziwayo weTenerife kunye nolunye unxweme lobunqunu. Unxweme lwasendle olunesanti emnyama kunye namaza amaninzi esingenakuphuthelwa xa sisiya esiqithini. Ikwayindawo efanelekileyo ukonwabela ukutshona kwelanga okuhle.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba Zokuhamba » ngokubanzi » Tenerife nudist iilwandle